Peji 10 - WWE RAW Mhedzisiro 26th Chikumi 2017, Dzazvino Muvhuro Husiku Vakundi vanokunda uye vhidhiyo inoratidzwa - Wwe
WWE RAW Mhedzisiro 26th Chikumi 2017, Yekupedzisira Muvhuro Husiku Vakunda vanokunda uye vhidhiyo inoratidzwa
# 1 Contender's gauntlet mutambo weWWE RAW Women's Championship
matauriro aungaita mumwe munhu waunovada usingakanganise hushamwari hwako
Bayley naNia Jax vakatitangisa. Bayley anga ari mutsika kwemavhiki mashoma apfuura uye hazvina kutarisika zvirinani kwaari manheru ano sezvo akazotongwa zvizere naNia Jax. Mushure menguva pfupi yekumuka kubva kuBayley, Nia akamurova neSamoan Drop kuti amubayire.
Mickie James akabuda akatevera. James akazotongwawo naNia Jax asi haana kudzokera shure. Akarova Nia kumeso asati arova Jax hombe nedhonza. Akaitevera nemuchinjikwa we2-kuverenga uye akaitevera neMick Kick asi akatadza kana kubvisa Jax patsoka dzake.
Nia akabva amhanyira kuna James ndokumupinha.
Mickie James anobviswa
Nia Jax akarova Dana Brooke negumbo rinomhanya nguva pfupi mutambo pawakatanga ndokumupinza.
Dana Brooke anobviswa
Emma aive abuda akatevera uye akabuda neplanmamu. Akaita guillotined Nia kupokana netambo nekukurumidza paakangosvika ndokumurova nedhoki rinomhanya. Kukanganisa kwake kwakauya paakananga patambo yepamusoro ndokuzvizivisa kuNia Jax.
Nia akamubata mumamiriro ekunze ndokurova Samoan Drop kuti abayire Emma.
Sasha akavhundutsa Nia nekuvhuna shaya achingobuda asati amurova kumeso. Nia akachaira kuna Sasha uyo akamunyenyeredza, achitumira Nia kurovera kuriside. Sasha akaitevera nekutiza kwekuzviuraya asi Nia akamubata mumamiriro ekunze asi akatadza kumisikidza Kudonhedza Samoan apo Sasha aidzedzereka achibuda. Sasha akaitevera nemabvi maviri pamaringi apo isu takananga kushambadziro.managed yekumhara Samoan Drop apo Sasha aidzedzereka achibuda. Sasha akaitevera nemabvi maviri pamaringi apo isu takananga kushambadziro.managed yekumhara Samoan Drop apo Sasha aidzedzereka achibuda. Sasha akaitevera nemabvi maviri pamaringi apo isu takananga kushambadziro.managed yekumhara Samoan Drop apo Sasha aidzedzereka achibuda. Sasha akaitevera nemabvi maviri pamaringi apo isu takananga kushambadziro.
Nia Jax akange adzoka mukutonga patakadzoka kubva mukutengesa paakatora Sasha pasi netambo hombe yehembe. Nia akatyaira bhutsu yake kumusana kwaSasha paakaenderera mberi nechirango. Nia akakundikana kubaya Sasha uye iye akangomuputira ndokumukanda kunze kweringi nekugumbuka
Nia akaedza kubaya Sasha asi Bhosi akaramba achirova, achiwedzera kushungurudzika kwaJax. Nia akavharirwa mubhegi hug seSasha yaitaridza kunge yaive padhuze nekumuperera. Nia akabva auraya Sasha ndokumurova nesuplex.
Sezvo Nia akaedza suplex yechipiri, Mabhangi akachinja uye akadzivirira kuedza kwaNia legdrop. Akazobata Nia mushaya nekumhanya kwemabvi. Sasha akabva avharira mumabhangi Statement akamira kwemasekonzi mashoma Nia asati amurova neDziva reSamoa.
Yakatarisa pamusoro peMabhangi sezvo Nia akaedza imwe Samoan Drop. Sasha akasungirirwa akasungirirwa uye akavharirwa mune yakagadziriswa Banks Statement sezvo Jax akapera kumabvi ake uye akamanikidzwa kubuda.
Nia Jax inobviswa
Sasha Banks ndiye mutsva # 1 anokwikwidza weRAW Women's Championship.
KUMASHURE MBERI 10/10
mari mumabhanga mamaki
Eddie guerrero aive nemakore mangani paakafa
unofanira kumirira kwenguva yakareba sei kuti udanane mushure mekurambana
wwe humambo rumble 2017 vapambi